China In-Mould Kushongedza-IML Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
In-Mould Kushongedza (isu takaidaidza kuti IMD) inozivikanwa inozivikanwa yekushongedza tekinoroji pasi. Inonyanya kushandiswa mukushongedza kwepamusoro uye panoshanda yemagetsi emidziyo yemagetsi. Inowanzo shandiswa mupaneru uye chiratidzo chefoni nhare yewindows lens uye ganda, yekuwachisa control pani, firiji inodzora pani, mhepo yekugadzirisa inodzora pani, mota dhibhodhi, mupunga wekubika control panel uye zvichingodaro.
IMD yakakamurwa kuita IML (IMF ndeya IML) uye IMR, mutsauko mukuru pakati pezviitiko zviviri ndezvekuti chigadzirwa chemukati chine firimu rekudzivirira.
IMD inosanganisira IML, IMF, IMR
IML: IN MOLDING LABEL (kudhinda zvinhu uye mapurasitiki zvikamu)
IMF: PAKUUMBISA FILM (yakafanana neIML)
IMR: MUNDA VERENGA
IML (IN MOLD LABEL): Iyo inoshamisa maitiro eImL ndeaya: pamusoro pechikamu cheyakaomeswa yakajeka firimu, yepakati iprinta dhizaini, kumashure ipurasitiki, nekuti inki yakanamatira pakati, inogona kudzivirira pemvura kubva kukwenya uye abrasion, uye anogona kuchengeta ruvara muenzaniso yakajeka uye kwete kuoma kwenguva refu. Aya maitiro anoita IML zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya.
IML maitiro: PET firimu yekucheka- kudhinda ndege - inki kuomesa yakatarwa - namira inodzivirira firimu - kubaya gomba -Thermoforming - yekucheka pemberi chimiro - zvinhu jekiseni kuumbwa.
Iwo matatu wedenga mamiriro eMIML chigadzirwa:
1. Pamusoro: Firimu (PET firimu, kudhinda chero pateni uye ruvara). Matanda, cortex, bamboo, jira, kutevedzera huni, kutevedzera dehwe, jira rekunyepedzera, kuteedzera simbi zvichingodaro;
2, yepakati yakaturikidzana: inki (Ink), glue, nezvimwe.
3, pasi: plastiki (ABS / PC / TPU / PP / PVC, nezvimwewo).
IMR (IN MOLD ROLLER): Mukuita uku, iyo pateni inodhindwa pane iyo firimu, uye iyo firimu uye iyo mhango mhango inosungwa neiyo firimu feeder yejekiseni kuumbwa.
Mushure mejekiseni, iyo inki yakaturikidzana ine pateni inopatsanurwa kubva mufirimu, uye iyo inki dara inosara pane chikamu chepurasitiki kuti uwane chikamu chepurasitiki neepuratifomu.
Iko hakuna yakajeka firita yekudzivirira pane yekupedzisira chigadzirwa pamusoro, uye iyo firimu inongogadzirwa chete. Anotakura mukuita. Asi zvakanakira IMR iri mune yakakwira degree of otomatiki mukugadzira uye nemutengo wakaderera wekugadzira kwakawanda. IMR zvinokanganisa: Yakadhindwa pateni yakaturikidzana pamusoro peichi chigadzirwa, iyo hukobvu hwemamicroni mashoma chete, chigadzirwa chichava nyore kupfeka chakadhindwa pateni rukoko mushure menguva yenguva, asi zvakare zvakareruka kupera, zvichikonzera kusatarisika pamusoro. Uye zvakare, iyo nyowani yechigadzirwa yekuvandudza kutenderera yakareba, mutengo wekuvandudza wakakwira, iyo pateni ruvara haigone kuwana diki batch inoshanduka shanduko iri zvakare iyo IMR maitiro haigone kukurira kushaya simba Izvo zvinodikanwa kuti utsanangure mune pfungwa: Iwo akakosha matipi eIMR. ndiyo dura rekuburitsa.
IMR maitiro: PET Firimu - inosunungura mumiririri - yekudhinda inki - Yekudhinda Bhainda - yemukati epurasitiki jekiseni - inki uye mapurasitiki ipapo - mushure mekuvhura iyo furu, iyo firimu inozoerekana yaburitsa kubva kuinki. Kunze kwemhando yemapepa akadhindwa, guruva rine simba rakakura pahunhu hwavo, uye kugadzirwa kwavo kunofanirwa kuitwa munzvimbo yakachena uye isina guruva.
Musiyano wakakosha pakati peIML neIMR ndewekuti pane akasiyana lens nzvimbo, ine PET kana PC mapepa pane iyo IML pamusoro uye chete inki pane iyo IMR pamusoro. IML kupfeka kuramba, kukwenya kusagadzikana uye pateni pateni kwenguva yakareba. IMR iri nyore kugadzirwa kwemazhinji uye nemutengo wakaderera. IMR haina kunyanya kusimira, nhare dzeNokia neMoto chikamu cheiyo IMR tekinoroji, nguva yakati rebei inokonzeresa kukwenya; kudhirowa kukuru kweIML ndeyekuti haigone kuitiswa seyese IML tekinoroji, inongogumira kunzvimbo inoenderera.
Zvimiro zve IMD / IML zvigadzirwa:
1, chigadzirwa dhizaini uye kujekesa kwemavara, haimbofa, uye matatu-mativi pfungwa;
2, chigadzirwa chine hupenyu hwakareba hwebasa, pamusoro pekupfeka kuramba uye kukwikwidza kusagadzikana, uye inochengeta chitarisiko chakachena uye chitsva.
3, kudhinda kururamisa kwe + 0.05mm, inogona kudhinda maitiro akaomarara uye mazhinji;
4, iyo pateni uye ruvara zvinogona kuchinjika chero nguva panguva yekugadzira maitiro pasina kushandura chakuvhuvhu.
5. Maumbirwo ezvigadzirwa zveIML haizi ndege yechimiro chete, asi zvakare chimiro cheyakakomberedzwa pamusoro, yakakomberedzwa pamusoro, yakatenderedza nzvimbo uye zvimwe zvakasarudzika-zvinoonekwa maitiro.
6, chigadzirwa hachina chero solvent yakavakirwa kunamatira, iyo inosangana nezvinodiwa munharaunda.
7. Kufambisa kwemahwindo kwakakwira kusvika pa92%.
8. Makiyi anoshanda ane mayunifomu mabhuru uye akanaka mubato. Makiyi acho akavezwa kana akajowa muforoma. Hupenyu hwekiyi hunogona kusvika kanodarika miriyoni imwe nguva.
Ipurasitiki IMD kesi
Transparent pani ine IML
IML kesi yekutaurirana kifaa
Imba yekushandisa IMD kiyi pani
Parizvino, IML iri kushandiswa zvakanyanya muminda yakawanda, senge mahwindo, makomba, lenzi, mota uye epamba midziyo yemagetsi inodzora uye zvikamu zvekushongedza, izvo zvinozogadziridzwa kuita mavara-ekunyepedzera uye indasitiri yemotokari mune ramangwana. Chigadzirwa chine yakanaka sunscreen mashandiro, inogona kushandiswa pamotokari zviratidzo, kuomarara kusvika 2H ~ 3H, inogona kushandiswa kune lenzi mbozha lenzi, nezvimwewo, bhatani hupenyu hunogona kusvika kanopfuura ka1 miriyoni nguva, inogona kushandiswa kune vanobika mupunga uye saka on.
IMD / IML inogona kuburitsa chikamu nechitarisiko chakanakisa uye kupfeka inodzivirira pamusoro. Asi iyo mutengo wakakwirira kupfuura iwo chaiwo epamusoro zvikamu. Kana chigadzirwa chako chichida chigadzirwa chakadai, ndapota taura nesu.
Pashure: Kuwedzeredza kwepurasitiki
Zvadaro: Insert Kuumbwa